Inkqubo yesixokelelwano selanga: ziziphi, iimpawu, izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Inkqubo yeepassive zelanga
Amandla elanga anendawo eyandayo kumakhaya azinzileyo. Ukuyilwa kwetekhnoloji kufuna ukuphucula ukusebenza kweepaneli zelanga ngokuzivumela ukuba zibambe isixa esikhulu semitha yelanga kwaye zivelise amandla ombane ngakumbi. Ndiyabulela kolu phuculo lwetekhnoloji, i iisentimitha zelanga. Ezi nkqubo zivumela amandla amakhulu elanga ukuba aqokelelwe ngeefestile, iindonga, uphahla, njl. ngaphandle kwesidingo sokusebenzisa izixhobo ezinje ngeefeni, iimpompo zokujikeleza, phakathi kwabanye.
Kweli nqaku siza kukuxelela ngazo zonke iimpawu, izibonelelo kunye nokusebenza kwenkqubo yokujikeleza kwelanga.
1 Zithini iiseti zelanga
2 Iinkqubo zelanga ezenziweyo kumakhaya e-bioclimatic
3 Ukufakwa kwelanga
4 Ukungancedi kweenkqubo zelanga
Zithini iiseti zelanga
Yinkqubo evumela ukubamba isixa esikhulu samandla elanga ngokusebenzisa izinto ezenziwayo. Ezi zinto ziifestile, uphahla, iindonga, njl. Kulapho igama lesenzi livela khona. Ezi zizinto ezingadingi ndawo ithile ukuze zisebenze.
Ukusebenza kwamandla kwezi nkqubo kuphezulu kakhulu kuba kuthatha ithuba lokuhambisa ubushushu. Ezi ndlela zezi: Ukuhanjiswa, ukuhanjiswa kunye nemitha. Ezi ndlela zintathu zokuhambisa ubushushu zidityaniswa kunye ukonyusa ubuninzi besenzo sokufumana ubushushu. Kule ndawo yamandla amandla aqokelelweyo asetyenziselwa ukuvelisa kamva isixa esikhulu samandla ombane.
Le yindlela ekunokwenzeka ukuba ifake amandla elanga ngakumbi ngendlela enobulumko neyoqoqosho. Kwaye ezi nkqubo zezibane zelanga ziyinxalenye yoyilo lwezindlu nezakhiwo. Ezi zinto ziya zisetyenziswa ngakumbi kuyilo lwe-bioclimatic. Olu lwakhiwo lujolise yenza izakhiwo ezizinzileyo ngokuphucula ukusebenza kwenxalenye nganye yekhaya ngokusekwe kwimozulu kunye nokuqhelaniswa.
Enkosi kubuchule bezi nkqubo zelanga zenzekelayo zokwahlula bucala ngaphakathi nangaphandle, kuyanceda ukunqanda umahluko wobushushu obomeleleyo. Oku kwenza ukuba ubushushu obuninzi buqokeleleke kwaye baya kuba ngaphakathi. Oku kuyenzeka xa amaqondo obushushu ngaphandle eqala ukwehla.
Iinkqubo zelanga ezenziweyo kumakhaya e-bioclimatic
Njengoko besesitshilo ngaphambili, eyona njongo iphambili yoyilo lwe-bioclimatic kukwamkela i-morphology yokwenza elona xesha lamandla elanga. Qaphela ummandla wolwakhiwo kokubini kuqhelaniso lwemozulu oluqhelekileyo kunye nexabiso lesixa semali yelanga. Ngale ndlela, ngenkqubo yelanga engenziwanga, iindonga, iifestile, uphahla, njl njl. Kwaye uthathe uninzi lwezinto ezisisiseko zezindlu ukuyinika ukusebenza kwe-bioclimatic.
Ukongeza, yenzelwe ukwakha ezinye izinto ezingafumaneki kwiindawo eziqhelekileyo ezinje ngezindlu zokugcina eluhlaza, iitshimini zelanga okanye iigalari zangaphakathi. Zonke ezi zinto ziqwalaselwe njengenxalenye yeenkqubo zelanga. Ukuthatha ithuba kuzo zonke izinto ezakhayo zekhaya ukuze ubambe isixa esikhulu semitha yelanga yinto eyimfuneko ukuvelisa amandla ombane ahlaziyekayo. Kwaye konke oku luphuculo lwetekhnoloji luneziphumo ezintle zokufezekisa intuthuzelo enkulu ngaphandle kwesidingo sokungcolisa. Abantu abaninzi bonyusa i-carbon footprint yabo ngokonyusa ubushushu okanye umoya opholileyo emakhayeni abo. Kungenxa yokuba imithombo yamandla ayinakuhlaziywa. Baxhomekeke kumandla efosili.
Ngokuchasene noko, iisistim zelanga ezenziweyo zisebenza zombini ngokuqhutywa, ukuhanjiswa kunye nemitha kwaye zilungele ukufumana ubushushu ngakumbi kumandla elanga. Iyahambelana namanye amandla Unokunikezela ngokusebenza ngokuchane ngakumbi njengamandla eshushu elanga. Iiphaneli eziqhelekileyo zelanga ze-photovoltaic nazo zinokudityaniswa.
Ukuze sithathe esona sixa sikhulu samandla elanga, sizama ukuthimba ngefestile, iifestile ezinkulu, iipatio eziglasiweyo, izibane esibhakabhakeni kunye nezinye izinto eziselubala okanye ezidlulayo. Ezi zinto zinokuthi zijolise kubuchule ngokuxhomekeke kukuqhelaniswa nombono wendawo yemozulu yasekhaya.
Ngakolunye uhlangothi, izindlu zokugcina izityalo kunye neendonga ze-inertia ziinkqubo ezibamba ngokungathanga ngqo amandla elanga. Imalunga nokuba nesithuba esiphakathi esikhoyo phakathi kwangaphandle kunye nendawo ofuna ukwenza kuyo. Njengakwiinkqubo zokuqokelelwa kwelanga ngokuthe ngqo, indawo yokuqala yimitha ethe ngqo ewela kwindawo eglasiweyo. Ukusuka kuloo ndawo, ubushushu bubuyiselwa kwindawo yomdla ngeendlela ezahlukeneyo. Enye yeendlela ezisetyenziswa kakhulu yile yobunzima be-thermal okanye i-convection. Ubushushu butshintshiwe bunokuphinda buhanjiswe ngokuvulwa kommiselo okanye ngokudityaniswa kwazo zombini iinkqubo.
Kukwakho namakhaya athi, ngenxa yendawo yawo yemozulu okanye indawo aziqhelanise nayo, angabinayo imeko eyimfuneko ukuze akwazi ukufaka ukukhanya kwelanga. Kuya kufuneka sazi ukuba kufuneka inani elikhulu lokukhanya kwelanga ukuba sifuna ukuvelisa amandla ombane ngokwaneleyo ukuba siwasebenzise. Kule meko, kukho ukhetho lokuba nakho ukuphumeza iinkqubo ezahlukeneyo ezinceda ukubamba amandla elanga ukude. Umzekelo, ungasebenzisa abaqokeleli bomoya belanga abenza umsebenzi wabo enkosi kubukho bemijelo yomoya. Ukuze usebenzise aba baqokeleli kufuneka ubambe indlela eyenza ukuba umoya ufikeleleke, ngenxa yoko ayizizo iinkqubo zokwenza izinto ngengqondo engqongqo.
Ukungancedi kweenkqubo zelanga
Njengoko unokulindela, nangona itekhnoloji entsha kwaye inezibonelelo ezintle, ikwanazo nezinto ezingalunganga. Kwiimeko ezininzi, ezi ngxaki zinokucuthwa ziye kubuninzi ukuba sisebenzisa uqhelaniso nolwakhiwo olufanelekileyo. Oku kungalunganga kubandakanya ilitha ekubonakalisweni okwenzekayo okanye kwimveliso egqithileyo okanye ehlwempuzekileyo.
Le miba yile ikwakhiwa kwe-bioclimatic ithathela ingqalelo kwaye yeyona nto ijolise kuyo. Zama ukwandisa zonke ezi zinto zixabisekileyo ukuya kuthi ga ngoku ukuze imveliso yamandla ombane ngenkqubo yelanga iye kwindawo ephezulu. Kwimeko nganye kufuneka ujonge Ixabiso elilula kunye noyilo olulungileyo lokudibanisa nayo yonke imithombo yamandla. Ngale ndlela, elona xabiso liphantsi lamandla lifezekiswa ngemveliso yombane ehlengahlengiswe ukunceda kulondolozo lwendalo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi ungafunda ngakumbi malunga neenkqubo zelanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Photovoltaic Solar Amandla » Inkqubo yeepassive zelanga
UMBONI kunye ne-SCOP